Eat Your Vitamins | ဗီတာမင်တွေကို စားမယ်
ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ ပါရာစီတမောလေး သောက်တတ်တဲ့၊ နှာဆေး ချောင်းဆိုးဖြစ်တာနဲ့ ဆေးခန်းပြေးတဲ့၊ ထစ်ခနဲ့ဆို ဟိုဆေးလေးသောက်လိုက် ဒီဆေးလေးသောက်လိုက်မှ သက်သာတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေ မမတွေအားလုံး ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတော့ ခဏလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ ကျန်းမာစေချင်လို့ပါ။
start your day withasong | တေးသီချင်းတွေနဲ့အစပြုလိုက်ပါ
“ခေါင်း၊ ပုခုံးနဲ့ ဒူးခြေဖျား.. ဒူးခြေဖျား .. ဒူးခြေဖျား ခေါင်း၊ ပုခုန်းနဲ့ ဒူးခြေဖျား မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်းနဲ့.. ပါးစပ်” ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့...
Golden Brown Beauty | ရွှေအိုရောင် ညိုချောအလှ
သိပ်လှတဲ့ ညိုချော မမလှလှတွေကို မြင်လိုက်ရင် မိန်းမသားချင်းဆိုပေမယ့် တကယ်ကို ငေးမိတယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အားလုံးကလည်း ညိုချောတွေများတာမို့ တို့မျက်လုံးတွေဆို ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ကို ဖြစ်လို့။ ညိုချောမမတို့လိုလှချင်လို့ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးမိသည်။
Dear friend, I pray that you may prosper in every way and that you are healthy, just as your soul is healthy.
အချင်းချစ်သူ၊ သင်၏ စိတ်နှလုံးသည်
ကောင်းစားသကဲ့သို့၊ သင်သည် အရာရာ၌
၃ ယောဟန် ၁း၂
Banana | ငှက်ပျောသီး
rain | မိုး...
meaning of the Tags
Human body is made up of two elements: sand (dust) and ocean (water). That's why we can never stay away from the strength of nature. လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မြေကြီးရယ်၊ ရေရယ်နဲ့ ဖန်ဆင်းထားတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း လူသားက သဘာဝပေတ်ဝန်းကင်နဲ့ ဝေးကွာပြီး အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ Here, we will discuss about how we can enhance our beauty naturally. ဒီကဏ္ဍမှာတော့ လှပြီးတို့တွေရဲ့ အလှကို သဘာသအတိုင်းလေး ပိုလှအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ပြောကြရအောင်။
Every single food is created to nourish our bodies. They are packed with different vitamins and minerals, but we sometimes forget their power and ability. အစားအစာ တစ်ခုချင်းစီက တို့အားလုံးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အားဖြည့်စေဖို့ပါ။ သူတို့တွေက မတူညီတဲ့ ဗီတာမင်တွေ၊ သဘာဝဓါတုဓါတ်တွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကို တို့တတွေ တစ်ခါခါမေ့လျော့နေမိကြပါတယ်။ Shall we talk about the Power of every single food, one by one? ဒါဆို အစားအစာတစ်ခုချင်းရဲ့ စွမ်းအားကို ပြောကြရအောင်လား။
There are many diseases (apart from genetical) which are caused due to our Lifestyle. အနာရောဂါအများစုက (မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်) ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် ရှင်သန်ပုံနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Under this tag, we will talk about Diseases and how we can cure them naturally. ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ရေးသားမယ့် ဆောင်းပါးတွေကတော့ ရောဂါဝေဒနာနဲ့ သူတို့ကို သဘာဝနည်းအတိုင်း ဘယ်လို ကုသကြမလဲဆိုတာပါ။
Our bodies, which is made up of 100 trillions cells, are working every single second. To perform their works, we need specific vitamins and nutrients. ဆဲလ်ပေါင်း ၁၀၀ ထရီလီယံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက စက္ကန့်မခြားအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့လည်း ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရတွေလိုပါတယ်။ Shall we the nutritional value to nourish our bodies naturally? ဒီတော့ သဘာဝအတိုင်းရနိုင်မယ့် အစားအစာကနေ ရနိုင်မယ့် အာဟာရအကြောင်းပြောရအောင်။
LEGAL DISCLAIMER | Copyright © seng mai kinraw 2016